Apple inoshandisa Hertz kukweretesa kuzvimiririra bvunzo mota | IPhone nhau
Ungafungidzira izvozvo here iyo kambani kupfuma zvepasi pano zvinogona kunge zvichiparadza. Asi zvinoita sekunge hapana chimwe chiri kumberi kubva pachokwadi, zvirinani izvo irwo ruzivo rwunouya kwatiri nezvenzira iyo Apple iri kushandisa kuti isashandise dhora zvakanyanya pamotokari dzekuyedza dzemota yayo yakazvimiririra. Muchokwadi, pfungwa yekuti Apple haisi kushanda pamotokari yekuzvityaira pachayo, asi pane inoenderana system iri kuwedzera kukosha.
Chokwadi ndechekuti iyo Cupertino firm haina kusarudza kuwana mota dzinogona kunge dzisina basa mushure mekuvandudzwa kwetekinoroji. Muchokwadi, akasarudza imwe leasing alternative uye ndiyo Hertz firm iri kubatana nemasevhisi ake.
Izvi zvinoratidza nezvehukama hweHertz neApple zvave kubuda kubudikidza neCalifornia department reMotokari Mota. Mutumbi weveruzhinji unoita kunge unoziva kuti Apple ine chibvumirano chekurendesa naHertz ane chinhu chinhu chidiki chemotokari dzefemu yeJapan Lexus (ndeyaToyota), kunyanya iyo SUV muenzaniso RX450h, zvese zvakadzama zvavanoshandisa mota dzakauchikwa kune kuyedzwa kwemota yakazvimiririra, kubvira patatanga kusevha, zvaisazove zvishoma nemafuta uye neEC2.
Zviri pachena, sezvo idzi nhau dzaizivikanwa muUnited States of America, Hertz masheya amuka 15% (panguva yekunyora uku). Zvinotaridza kuti varimi uye vanofungidzira havapedze nguva vachiita bhizinesi nechero kambani iri huya kuno zvishoma kune mutengi zvemagetsi hofori. Muchidimbu, hachisi chiitiko chekupayona, muchokwadi Alphabet (amai amai kambani) vakaita chibvumirano chimwe chete neAvis, asi mune iyi nyaya vachishandisa Chrysler Pacifica modhi mota.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoshandisa Hertz kukweretesa yekuzvidzora-kutyaira bvunzo mota
Apple inowana nyanzvi nyanzvi yekutevera maziso ... zvechii?